खर्च कम गर भनेपछि यी मोडलले विवाहको एक हप्ताभित्रै श्रीमानलाई दिईन् डिभोर्स - samayapost.com
खर्च कम गर भनेपछि यी मोडलले विवाहको एक हप्ताभित्रै श्रीमानलाई दिईन् डिभोर्स
समयपोष्ट २०७६ माघ २३ गते १०:१७
जापानकी एक मोडल कातो सारीले विवाह गरेको एक हप्तामा नै श्रीमान‍्सँग सम्बन्धविच्छेद गरेकी छिन् । श्रीमानले कम खर्च गर्न भनेपछि आफूले रिसाएर सम्बन्धविच्छेद गरेको उनले बताइन् ।
२९ वर्षे कातो सारी विलासी जीवनशैलीका लागि परिचित छिन् । उनी असाध्यै महँगो फेसन ब्रान्डकी पारखी पनि हुन् । तर उनका श्रीमानले कहिल्यै पनि सोचेका थिएनन् कि उनकी श्रीमतीको खर्च गर्ने बानीले उनको व्यवसायलाई नै धरापमा पार्नेछ । नाम नखुलाइएका रियल स्टेट व्यापारीले यी मोडललाई सन् २०१९ मे देखि डेटिङ गर्न थालेका हुन् । विवाह हुनु साढे तीन महिना अघि उनले ती व्यावसायीको ९.१ मिलियन डलर (करिब १ अर्ब रुपैयाँ बढी) खर्च गरिन् । यति हुँदा हुँदै पनि उनले सारीसँग विवाह गरे तर विवाहको पहिलो हप्तामा उनले श्रीमतीलाई आफ्नो व्यावसाय खासै राम्रो नभएकोले खर्च कम गर्न आग्रह गरे । श्रीमानको यस्तो आग्रह उनलाई चित्त बुझेन तसर्थ सम्बन्धविच्छेदको माग गरिन् ।
केहि दिन अघि रिलिज भएको युट्युब भिडियोमा कातो सारीले छुट्टिएको ६ महिनापछि सम्बन्धविच्छेद टुङ्गो लगाएको जानकारी दिइन् । ती मोडलले श्रीमानले खर्च कम गर्न भनेपछि विवाहको पहिलो हप्तामा नै सम्बन्धविच्छेदको निवेदन दिएको जानकारी दिइन् ।
‘उनीसँग विवाह भएको के अर्थ भयो र ? श्रीमतीको खर्च गर्ने बानी थेग्न नसक्ने गरिब व्यक्तिमाथि मेरो कुनै रुची छैन,’ उनले भिडियोमा भनिन् ।
कातो सारीले पैसाका लागि ती व्यक्तिसँग विवाह गरेको प्रशंसकसामू स्विकारिन् । उनले आफ्नो श्रीमानको पैसाले महँगा कार, गहना र लुगाफाटो किन्न सक्दिनन् भने उनीसँग विवाहको के औचित्य रह्यो भन्ने प्रश्न गरेकी छिन् । उनका अनुसार महिलाले गर्भावस्था, बच्चा जन्माउने, हुर्काउनेलगायतका जैविक प्रक्रियाबाट गुज्रनुपर्ने हुन्छ जबकी पुरुषले आफ्नो परिवार र बालबच्चाका लागि पर्याप्त पैसा जुटाउनुपर्छ ।
ती मोडलको यस्तो खुलासा र विवाहप्रतिको उनको धारणा कतिजनालाई फिटिक्कै चित्त बुझेको छैन जसलाई उनीहरुले कमेन्टमार्फत् पोखेका छन् ।
‘यहाँ खराब आचरण भएका थुप्रै महिला छन् तर उनी त अर्कै स्तरकी रहिछिन्,’ एक व्यक्तिले युट्युबमा कमेन्ट गरेका छन् ।एजेन्सी
रातो गुलाबमा बेरिएको भेटियो दुर्लभ निलो सर्प, हेनुृहोस् भिडियो
लिंकनको कपालको टुक्राको मुल्य ८१ हजार डलर
मलमासमा के गर्नहुन्छ, के हुँदैन ?
यसरी डाक्टरले मुखबाट निकाकाले ४ फिटको सर्प (भिडियो)
अमिताभले किनेको यो नयाँ कार, सोसल मिडियामा भाइरल
आन्तरिक पर्यटक लोभ्याउन वायुसेवा कम्पनीले घोषणा गरे सस्तो प्याकेज, हेर्नुहोस् कुन एयरलाइन्सका कस्ता छन् अफर ?
बाढीले ११ विद्युत आयोजनामा क्षति, सञ्चार क्षेत्र समेत प्रभावित भएपछि सोलार जडान गरी सेवा सुचारु
शेरधन राईमाथि यौन शोषणको आरोप लगाउने बालिका खड्का पेरिसडाँडाबाट पक्राउ